Kulanka Xildhibaanada Shacabka oo goordhow furmay – Kalfadhi
Kulanka Xildhibaanada Shacabka oo goordhow furmay
Waxaa goordhow furmay kulanka 2aad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay soo xaadireyn Xildhibaanadii loo baahnaa ee ku furmi lahaay Kooram Baarlamaanka sida uu shaaciyay Guddoonka Golaha Shacabka.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa warbaahinta iyo Xildhibaanada goordhow u sheegay in fadhiga Golaha Shacabka uu furan yahay islamarkaana ay soo xaadirayn Xildhibaano gaaraya 156 Xildhibaan lana gudi galayo Ajendaha maanta horyaala Golaha Shacabka.
Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn shacabka Soomaaliyeed ay ka heysato dhinaca amniga islamarkaana ay baarlamaanka ka hadli doonaan maalinta Sabtida ee todobadaadka soo socda.
“Qatarta ugu wayn ee heysata Shacabka Soomaaliyeed waa amni darro oo ka jirta dalka oo dhan waxaana maalinta Sabtida ah ka doodi doonaa arimaha amniga” Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan isagoo ka hadlayay furitaanka kulanka 2aad ee Golaha Shacabka.
Waqtiga soo xaadirista fadhiyada Golaha Shacabka oo la kordhiyay